Energy Storage System Solution, China Energy Storage System Solution Manufacturers, Suppliers, Factory - HNAC Technology Co., Ltd.
Imba>Products Supplier>Energy Storage System Solution
HNAC inogona kupa zvigadzirwa zvekuchengetedza simba izvo zvinosanganisirwa optical yekuchengetedza yakabatanidzwa muchina, simba rekuchengetedza simba rekushandura uye bhokisi rudzi rwekuchengetedza simba:
1. Optical storage integrated machine: The optical storage integrated machine is a device yakabatana ne photovoltaic array, bhatiri system uye grid (uye / kana mutoro) kuti uone kushanduka kwesimba remagetsi. Inogona kudzora iyo photovoltaic discharge process uye yekuchaja uye yekuburitsa bhatiri. Ichiita AC-DC shanduko, inogona kupa zvakananga AC mutoro pasina gidhi remagetsi.
2. Chengetedza chekuchengetedza magetsi: Mumagetsi emagetsi ekuchengetedza simba, inova mudziyo wakabatana pakati pebhatiri system negridi (uye/kana kurodha) kuona nzira mbiri dzekutendeuka kwesimba remagetsi. Inogona kudzora kuchaja uye kuburitsa maitiro ebhatiri, uye kuita AC-DC shanduko. Iyo zvakare inogona kupa zvakananga simba kune AC mutoro.
Pamidziyo miviri iri pamusoro, zvigadzirwa zvidiki zvekuchengetera magetsi zvinogona kuiswa kumamiriro ezvinhu akadai semagetsi epamba, magetsi emumunda, uye zviteshi zvekutaurirana, uye makuru uye epakati-saizi ekuchengetedza simba zvigadzirwa zvinogona kuiswa kumamiriro ezvinhu senge chizvarwa-padivi simba. chengetedzo, grid-side simba rekuchengetedza, uye microgrid simba rekuchengetedza.
3. Bhokisi remhando yekuchengetedza simba: Muchinangwa chekusimudzira chigadzirwa uye kushandisa, ina PCS yakajairwa zvigadzirwa zvine mugaba zvakagadziridzwa, ina PCS booster yakasanganiswa kabhini yakajairwa zvigadzirwa, uye zvimwe PCS bhokisi-mhando yekuchengetedza simba zvigadzirwa uye bhokisi-mhando yekuchengetedza simba masisitimu. inogona kugadzirwa uye kugadzirwa. Iyo simba rekuchengetedza sisitimu inogona kugadziridzwa uye yakagadzirirwa zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi. Inogona kusangana nezvinodiwa zvezviitiko zvakasiyana uye hunyanzvi hwakasiyana senge peak shaving/frequency modulation, multi-power micro-grid system, uye nekukurumidza-kucheka backup magetsi.
Hunhu hwematatu makuru emhando yezvigadzirwa zvekuchengetedza simba zvinosanganisira optical chengetedzo yakasanganiswa michina, magetsi ekuchengetedza simba anoshandura uye bhokisi remhando yekuchengetedza simba:
1. Optical storage integrated machine:
A. Mushonga wakabatanidzwa unotsigira kuwana panguva imwe chete yemitoro, mabhatiri, magetsi emagetsi, dizeli generator, uye photovoltaics;
B. Yakabatanidzwa EMS basa, magetsi akachengeteka uye akagadzikana, uye kushandiswa kwesimba idzva kunowedzera;
C. Kuchinja kusina musono pakati pe-on-grid uye off-grid states, kugovera kusina kukanganiswa kwekutakura;
D. Yakazara kuchengetedza basa kuchengetedza ese-mu-imwe muchina uye bhatiri;
E. Flexible rutsigiro rwemabhatiri e-lithium uye mabhatiri e-lead-acid
F. Iyo photovoltaic controller inogona kuwedzerwa kuti iite kuti flexible configuration ye photovoltaic simba.
2. Shanduri yekuchengetedza simba:
A. Nehungwaru reactive simba muripo uye harmonic muripo mabasa, zvinobudirira kuvandudza kunaka kwemagetsi grid;
B. Nekudzivirirwa kwechitsuwa uye kukwira kwemhepo yakaderera kuburikidza nebasa (rinogona kuiswa);
C. Intelligent mberi uye reverse kushanda kunatsiridza kuvimbika hurongwa;
D. DSP dhizaini inoziva iyo yakazara dhijitari kutonga kweiyo simba rekuchengetedza inoshandura module;
E. Multiple chengetedzo dziviriro, AC uye DC pamusoro uye pasi voltage kudzivirira, pfupi dunhu kudzivirira;
F. Adopt advanced active power factor correction tekinoroji kuderedza kupindira kweharmonics kune gidhi remagetsi;
G. Iine hafu-wave mutoro simba uye yakanaka kutakura kuchinjika.
3. Bhokisi rudzi rwekuchengetedza simba:
A. Customizable dhizaini kusangana zvakasiyana zvinodiwa vatengi;
B. Matatu-nhanho BMS system yekuvakisa, yakachengeteka uye yakavimbika;
C. High system yekubatanidza, yakasanganiswa bhatiri system, PCS, simba rekutonga hurongwa, tembiricha yekudzora system, moto kudzivirira system, yekuwana control system, nezvimwewo;
D. Kusanganisira voga mhando uye vasiri voga mhando;
E. Millisecond switching inogona kushandiswa segadziriro yekuchengetedza magetsi kune yakakosha michina;
F. Iine kutaurirana kwakakwana, kutarisa, kutarisira, kutonga, kunyeverwa kwekutanga uye kuchengetedza mabasa, kushanda kwenguva refu kunoramba kuripo uye kwakachengeteka, kuonekwa kwemaitiro ekushanda kwehurongwa kuburikidza nekombuta inogadzirisa, kukwanisa kuongorora data yakakwana, uye mabasa emagetsi ekukurumidzira.
Iyo Monitoring System uye Dziviriro System
Kunze Switchyard (Substation)